1000M Soosaarayaal & Shirkado aan Poe ahayn - Shiinaha 1000M Warshad aan PoE ahayn
ES1208 Gigabits Is-beddelka Maareynta
ES1208 waa 8-deked 10/100 / 1000mbps unterched Ethernet biiro iyadoo la adeegsanayo Realtek RTL8370N chipset. ES1208 waxay hubisaa qoondeynta xaddiga xadka ballaadhinta ee deked kasta iyadoo loo marayo habka gudbinta bakhaarka iyo u soo gudbinta iyo qoondaynta xusuusta firfircoon. Waxay bixisaa sideed 10/100 / 1000Mbps dekado la-qabsi ah oo la jaan qaada 10base-T, 100base-TX iyo 1000Base-T shabakadaha bey'ada, wada-xaajoodka xawaaraha dekedda 10/100 / 1000Mbps. Tilmaamayaasha LED-ka ayaa soo bandhigi kara awoodda iyo isku xidhka isku xidhka / kala-goynta si firfircoon. ES1208 waa li ...
ES1210P Gigabits Beddelka Maareynta
Beddelka ES1210P waa gigabit-ka buuxa ee DCN ee aan la xakamayn, oo bixiya siddeed 10/100 / 1000Mbps dekado la-qabsi ah iyo laba 100 / 1000Mbps SFP dekado indhaha ah, oo dhammaantood taageera gudbinta xawaaraha siligga. Tilmaamayaasha LED-ka ayaa soo bandhigi kara awoodda iyo isku xidhka isku xidhka / kala-goynta si firfircoon. ES1210P waxay leedahay naqshad is-dhexgal sare, miisaan fudud iyo hawlgal fudud, oo ku habboon xafiis yar iyo mid dhexdhexaad ah iyo shabakad gelitaanka amniga ah. Astaamaha waafaqsan IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az ...
ES1226P Gigabits Beddelka Maareynta
ES1226P waa DCN-gigabit buuxa biiro marin-u-helitaan la'aan, oo siineysa 24 10/100 / 1000Mbps wada-xaajood toos ah RJ45 iyo laba 1000mbps SFP. Qalabaynta looma baahna marka qalabka la geeyo, iyo gudbinta xawaaraha siligga ee dhammaan dekeddaha ayaa la ogaan karaa ka dib marka korontadu isku xirto, taas oo la kulmi karta xaaladaha kala duwan ee marin u helka Ethernet. ES1226P waa aaladda doorbideysa shirkadaha, makhaayadaha internetka, meelaha la degan yahay iyo shabakadaha kambuyuutarka si loo dhiso gigabit marin u hel. Astaamaha waafaqsan IEEE802.3 、 IEE ...
ES1224 Gigabits Switch Unmanaged
Beddelka ES1224 waa gigabits-ga buuxa ee DCN ee aan la maamulin, wuxuu bixiyaa afar iyo labaatan 10/100 / 1000Mbps dekado la-qabsi ah, dhammaantoodna waxay taageeraan gudbinta xawaaraha siligga. ES1224 waxay hubisaa qoondaynta xadka ballaadhinta hufan ee deked kasta iyada oo loo marayo habka gudbinta bakhaarka iyo u gudbinta iyo qoondaynta xusuusta firfircoon. Waxay sidoo kale taageertaa xakamaynta socodka taas oo si wax ku ool ah uga fogaan karta luminta baakadka ee gudbinta iyo soo dhaweynta. Heerka tamarta Ethernet ee IEEE802.3az ee ES1224 ayaa ka dhigaya inay si wax ku ool ah u yareyn karto isticmaalka tamarta iyo ...
ES1216 Gigabits Beddelka aan La Maamulin
Bedelaadda ES1216 waa DCN-gigabits buuxa oo aan la maamulin, oo bixiya lix iyo toban 10/100 / 1000Mbps dekado la-qabsi ah, dhammaantoodna taageera xawaaraha silig-gudbinta. ES1216 waxay hubisaa qoondaynta xadka ballaadhinta hufan ee deked kasta iyada oo loo marayo habka gudbinta bakhaarka iyo u gudbinta iyo qoondaynta xusuusta firfircoon. Waxay sidoo kale taageertaa xakamaynta socodka taas oo si wax ku ool ah uga fogaan karta luminta baakadka ee gudbinta iyo soo dhaweynta. Heerka tamarta Ethernet ee EEEE802.3az ee ES1216 wuxuu ka dhigayaa inay si wax ku ool ah u yareyn karto isticmaalka tamarta iyo qaabka ...